घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरू गेब्रियल Magalhaes बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
हाम्रो गेब्रियल Magalhaes जीवनी तपाईंलाई उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, आमा बुबा, परिवार, आमा बुबा, प्रेमिका / पत्नी हुनु, नेट वर्थ, जीवन शैली र व्यक्तिगत जीवन मा तथ्य बताउँछ।
संक्षिप्तमा, यो ब्राजिलका फुटबलरको यात्राको कहानी हो, उसको बाल्यकालदेखि, जबसम्म उहाँ सफल हुनुभयो। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, यहाँ वयस्क ग्यालेरीमा उनको बाल्यकाल छ - गेब्रियल म्याग्लाहेजको बायोको एक सारांश।
ब्राजिलियनको जीवन र उदय कथा।
वर्ष २०२०, निस्सन्देह, आर्सेनलको फुटबलमा अनपेक्षित धेरै परिस्थितिहरूको समाधान भयो। चाखलाग्दो कुरा, माइकल अर्टेटा प्रशंसकहरूलाई खुशी पार्ने तरिका आइकनिक डिफेन्डरको भव्य आगमन हुन गइरहेको थियो।
अब उनको स्थानान्तरणको बारेमा धेरै सुनेको छ, यो सम्भव छ कि फुटबल फ्यानहरूले गेब्रियल म्याग्लाहेसको जीवनीको बारेमा धेरै पढेका छैनन्। तसर्थ, हामीले यो उत्कृष्ट लेख राख्यौं र थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
गेब्रियल म्यागलहेस बाल्यकाल कहानी:
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उहाँको पूरा नाम हुन् गेब्रियल डोस सान्तोस मागाल्हेस। ब्राजिलका फुटबलर डिसेम्बर १ 19 1997 of को १ day तारिखमा उनका आमा बुबा, श्रीमती र श्रीमती मार्सेलो मगाल्हेज ब्राजीलको साउ पाउलोको पीरिटुबा जिल्लामा जन्मनुभएको थियो।
सानो गब्रिएल (तल चित्रमा) आफ्नो बुबा, मार्सेलो र एक सानो ज्ञात आमा बीचको मिलनबाट जन्मेका धेरै बच्चाहरू मध्ये एक हो।
हेर्नुहोस्, गब्रिएल मगालहेजको दुर्लभ बाल्यकालको फोटो। आईजी लाई क्रेडिट
हो, तपाईं र मलाई थाहा छ कि सबैजना अनौंठो उपहारको साथ जन्मेका छन्। जे होस्, एक उपहार पत्ता लगाउन र प्रयोग गर्न लिइएको समय मालिकमा निर्भर गर्दछ। भाग्यवस, गब्रिएल मगालहेजले आफ्नो फुटबल प्रतिभाको बारेमा धेरै कलिलो उमेरमा थाहा पाए जुन उनको आमा र बुबाले समर्थन गर्नुभयो।
आफ्नो बाल्यावस्थाका दिनहरूको सम्झना गर्दै, गेब्रियल आफ्ना साथीहरूसँग प्रत्येक पटक स्कूलबाट फर्कंदा फुटबल खेल्ने कुरा सुनाउँछन्। सत्य के हो भने, शब्दहरू खुशी र पूर्तिलाई वर्णन गर्न सक्दैनन् जुन उनलाई समात्छ जब उनी फुटबल खेल्छन्। यो फुटबलले गेब्रियलको बाल्यकालको व्यवहारलाई मुख्य शक्ति बनाएको जस्तो भयो।
गेब्रियल Magalhaes परिवार पृष्ठभूमि:
भाग्यवस, भविष्य आर्सेनल प्लेयरको सम्पूर्ण घरले आफूले प्रदर्शन गरिरहेको असाधारण कौशललाई आँखा चिम्लेनन। शुभ समाचार यो हो कि गेब्रियल म्याग्लाहेजका आमाबुबाले फुटबलको लागि उनको प्रेम लिए जस्तै परिवारको भविष्य यसमा निर्भर गर्दछ। तसर्थ, उनीहरूले आफ्नो छोरालाई पेशेवर फुटबलमा उन्नतिका लागि मद्दतको लागि खोजे। हामी तपाईंलाई पछि यसको बायोमा यसको थप सार दिन्छौं।
गेब्रियल Magalhaes परिवार मूल:
यो जहिले पनि गरिन्छ, हामी ब्राजिलको उसको पैतृक सम्पदाबाट जातीयताको बारेमा छलफल गर्नेछौं। आफ्नो जन्म स्थानको आधारमा, गेब्रियल म्याग्लाहेज परिवारको जरा साओ पाउलोबाट उत्पन्न भयो। यदि तपाईंलाई थाहा थिएन, यो शहर जहाँ ब्राजिलमा अवस्थित छ।
ब्राजिलियन डिफेन्डर साओ पाउलोको हो। हेर्नुहोस् कसरी उसको जन्म स्थान नक्शाको आउट स्केचको नजिक अवस्थित छ।
गब्रिएल उनका परिवारका अधिकांश सदस्यहरू साओ पाउलोको स्वदेशी बोली - पोर्तुगाली बोल्नमा प्रवीण हुन्छन्। यद्यपि, फुटबल प्रयासहरूले ब्राजिलियालीहरूलाई फ्रेन्च सिक्न अनिवार्य पारेको छ। संक्षेपमा, गेब्रियलले पोर्तुगाली र फ्रेन्च दुबैमा कुराकानी गर्न सक्दछन्।
गेब्रियल Magalhaes फुटबल मूल - अभियान:
यंग्स्टरका लागि साउ पाउलोको उत्तरपश्चिमी किनारमा अवस्थित पिरीटुबा जिल्लाको सडकमा हुर्किएको बाल्यकाल खेलकुदका सम्झनाहरूले भरिएको थियो।
त्यस पछि, ऊ प्रायः फुटबल खेल्न साथीहरूसँगै ट्याग गर्दछ। फुटबल क्यारियरको सम्भावना देखेर, छिमेकीहरूले गेब्रियल म्याग्लाहेजका आमाबाबुलाई आफ्नो छोरालाई फुटबल एकेडेमीमा भर्ना गर्न सल्लाह दिनुपर्‍यो। भाग्यवस, उनको बुबा सार्वजनिक सल्लाह माने र एक फुटबल स्कूल मा जवान गेब्रियल पंजीकृत।
के तपाईंलाई थाहा छ? ... फुटबल स्कूलमा दुई हप्ता मात्र बिताएपछि, फुटबलको परीक्षणको लागि अवसर युवा केटाका लागि खोलियो। गब्रिएल र उसको बुबाले trial०० माईल भन्दा टाढा यात्रा गरेका थिए उनको परीक्षण फ्लोरियानोपोलिस आधारित क्लब, अवईमा भेट गर्न। तपाईं ब्राजिलियन फुटबल उधमले एक प्रभावशाली प्रदर्शन राख्नुभयो र अवकाई एकेडेमीमा स्थायी स्थान प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने तथ्यलाई विश्वास गर्नुहुन्न।
पहिलो क्यारियर अवरोधहरू: होमस्केनेस बिरूद्ध लडाई:
चाखलाग्दो कुरा के छ भने युवा ब्राजिलले १ai बर्ष अवई फुटबल एकेडेमीको लागि घर छोडे। परिवारका सदस्यबाट टाढा बसेको यो पहिलो पटक थियो। सत्य यो हो कि उसले आफ्नो परिवारको बारेमा सोच्दा पनि त्यो असह्य थियो। दुःखको कुरा, गेब्रियल फुटबलको लागि आफ्नो बुवा, आमा र भाइबहिनीहरूलाई छोड्न सकेन। तसर्थ, उनले फुटबल मा हार माने र फिर्ता आफ्नो घर गए।
घर पुग्दा सबथोक युवा गेब्रियलको लागि अनौंठो देखिन्थ्यो। सबैभन्दा पहिले, उसले आफूलाई एकाकीपनमा भर्ती गर्नुपर्‍यो र आफ्नो निर्णयमा चिन्तन गर्यो। धन्यबाद, गेब्रियलका बुबाले उनलाई एक मुट्ठीभर सल्लाह दिनुभयो। आफ्नो बुबाको प्रोत्साहनका शब्दहरूको पालन गर्दै, युवा ब्राजिलियन अवइ एकेडेमीमा फर्कन थाले। यसैले उसको फुटबल क्यारियरको उत्पत्ति सुरु भयो।
अवाडे एकेडेमीमा उसले आफ्नो फुटबल अभियान जारी राख्नु भएको केही बर्ष पछि उसले कती युवा देख्यो।
परिवारलाई फेरि फुटबलको लागि छाड्दै:
अवाईमा फर्किएपछि युवा केटाले अन्य ब्राजिलियन गेब्रियलहरूले गरेको जस्तै खेलमा ध्यान दिन थाले Barbosa र मार्टिनेली। सत्य के हो भने, डिफेन्डिंग उसको पहिलो भूमिका थिएन। उसले फ्रन्टमा खेल्न सुरु गर्यो जस्तो उसको साथीहरूले गरेको थियो - जस्तो मनपर्दो छ विनिसीस जूनियर र डेभिड नेरेस.
दुर्भाग्यवश, प्रशिक्षणको दौरान गब्रिएलको प्रदर्शनले एक महान आक्रमणकारीको चरित्र प्रतिबिम्बित गर्दैन। तसर्थ, उनको कोचले उनलाई सबै बायाँ पछाडि स्थितिमा रूपान्तरण गर्नुपर्‍यो किनभने उहाँ बायाँ खुट्टा हुनुहुन्थ्यो र बचाव भूमिकामा अधिक उपयुक्त थियो। धन्यबाद, गेब्रियलको कडा परिश्रम र लगातार प्रशिक्षणले फल फला। ऊ १ 18 वर्षको हुँदा गब्रिएलले क्लबको लागि डेब्यू गरे।
उसले बलको १--यार्ड बक्सबाट लात हिचकिचाउँदैन।
गेब्रियल Magalhaes प्रख्यात रोड:
अवाइको लागि खेलेको केही बर्ष पछि गेब्रियल यस पटक आफ्नो परिवारलाई टाढा देश फ्रान्समा छाडे। उसले लिग १ टीममा साइन इन गर्यो - LOSC Lille।
LOSC Lille को लागी खेल्न को लागी ऊ आफ्नो फुटबल क्यारियर को प्रगति गर्दछ।
फ्रान्स पुगेपछि गेब्रियल समाजको चिसो मौसम र भाषा - फ्रेन्च - भाषाबाट मोहित भए र स्तब्ध भए। त्यसकारण वातावरणको हावापानीको अनुकूलतामा उनलाई समय लाग्यो। यस बाहेक, गेब्रियलले फ्रेन्च भाषा सिक्नको लागि निजी पाठ पनि लिए।
डिफेन्डरले जून २०१ 2017 मा ESTAC ट्रॉयसलाई edण दिनु अघि लिलसँग धेरै समय बिताएनन्। ट्रोयसमा, गेब्रियलले राम्रो प्रदर्शन गरेनन्। उनि पछि GNK दीनामो जग्रेब द्वितीय edण लिनु अघि टीमको लागि मात्र एउटा खेल खेल्न सक्थे।
गब्रिएल Magalhaes सफलता कहानी:
जून २०१ in मा fromणबाट फर्केर आएपछि, जवानले प्रभावशाली प्रदर्शन गर्ने अवसर पाए। वास्तवमा भन्ने हो भने, गब्रिएलले अप्रिल २०१ 2018 मा प्रतिष्ठित पेरिस सेन्ट-जर्मेन टोली बिरूद्धको खेलमा लिलको लागि पहिलो गोल बनाए - उनी हतारमा बिर्सिएनन।
लिलको लागि पहिलो गोल गोल गरेपछि उसको विस्मयकारी प्रतिक्रिया हेर्नुहोस्।
लिलको पहिलो एघारको श्रेणीमा उठ्दै, ब्राजिलियन आइकनले चाँडै नै पर्याप्त खेलको समय प्राप्त गर्‍यो। उसको सुधार विवादित भयो। के तपाईंलाई थाहा छ? ... ऊ मनपराएकोसँग खेल्‍यो भिक्टर ओसिम्हेन जो २०२० मा शहर को कुरा हो।
को स्तरमा उठ्दै Marquinhos, ग्याब्रिएलले २०२० स्थानान्तरण बजार खुल्ने क्रममा म्यानचेस्टर युनाइटेड एफसी र आर्सेनल एफसी जस्ता प्रभावशाली क्लबहरूको चासो लिन थाले। यो आर्सेनलको थियो माइकल अर्टेटा त्यो सेप्टेम्बर २०२० मा उहाँलाई दीर्घकालीन सम्झौताको लागि हस्ताक्षर गर्ने सम्झौतामा छाप छ। बाँकी, तिनीहरू भन्छन् कि, इतिहास हो।
उनको नाम व्यापक रूपमा प्रख्यात भयो जब उनले आर्सेनलसँग दीर्घकालीन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
गेब्रियल Magalhaes प्रेमिका बारे:
आफ्नो राइज टु फेमदेखि, ब्राजिलियन शाईनले फ्यानहरू र ब्लगरहरूलाई उनको प्रेम जीवनको बारेमा सोधपुछ गर्न मद्दत पुर्‍यायो। उसको ताजा प्यारा लुक र खेलको शैलीको आधारमा, त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गरिरहेको छैन कि महिलाहरू सम्भावित प्रेमिका र पत्नी र आफ्ना बच्चाहरूको वा बच्चाको आमाको स्थिति लिन कतारमा जान चाहँदैनन्।
सत्य यो हो कि गाबले आफ्नो सम्बन्ध जीवन व्यक्तिगत राखेका छन। समर्पित फुटबल खेलाडी यस तथ्यलाई जान्दछन् कि उनले एक उत्कृष्ट क्यारियर उपलब्धि रेकर्ड गर्न अतिरिक्त माईलमा काम गर्नु पर्छ। यो, अवश्य पनि, आफ्नो प्रेमिका खुलासा गर्नु अघि आउनु पर्छ। अहिलेको लागि, कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध बिग्रनबाट जोगिन उहाँ यथासक्दो प्रयास गर्नुहुन्छ।
गेब्रियलले गरेका सबै अन्तर्वार्ताहरूको न्याय गर्दै उनले कहिल्यै विवाह वा परिवारको पालनपोषण गर्ने कुरामा चासो देखाएनन्। ऊ सायद उसलाई वैवाहिक सम्बन्धमा आफूलाई प्रतिबद्ध गर्न धेरै चाँडो महसुस गर्दछ।
गेब्रियल Magalhaes परिवार जीवन तथ्यहरु:
हो, धेरै आर्सेनल प्रशंसकहरू आइकनिक प्लेयरको प्रशंसा गाउँदैछन्। इमान्दारीताका साथ, तपाईं उसलाई चिन्न सक्नुहुन्न यदि उहाँ आफ्नो परिवारका सदस्यहरू - विशेष गरी आमा बुबा को समर्थन को लागी होईन। हामी उनीहरूको बारेमा बढी बताउँछौं!
गेब्रियल Magalhaes बुबा को बारे मा:
पहिले बन्द, सुपर बुवा मार्सेलो म्याग्लाहेज नामबाट जान्छन् र उनी आफ्नो नम्बर एक फ्यान हुन्। मार्सेलो म्याग्लाहेस एक ऐसे बुबा हुन् जसले आजसम्म सधैं आफ्नो छोरालाई हेर्न स्टेडियममा प्रवेश गर्छन्। गब्रिएलको क्यारियर जीवनको सबैभन्दा अन्धकारमय क्षणमा पनि, उनको बुवाले सँधै नैतिक र मानसिक सहयोग गर्न समय लिनुभएको छ। तल चित्रमा मार्सेलो म्याग्लाहेज र गाब छन्।
उसको छेउमा पोष्ट गर्दै गब्रिएल मग्लैहसका बुबाको एक दुर्लभ फोटो।
गेब्रियल Magalhaes आमाको बारेमा:
फेरि ब्राजिलियनको जीवनमा अर्को अतुलनीय व्यक्तित्व उसको आमा हो। उनको बारेमा हामीले अवलोकन गरेका पहिलो मिडियामा लजालु दृष्टिकोण थियो। यद्यपि उनी स्न्यापशट लिनको प्रशंसक होइनन्, गब्रिएलकी आमाले उनलाई सँधै सफलताको ईच्छा गरे। यस मातृत्व हेरचाहले भर्खरको समयमा, यसको लाभांश तल देखाईएको छ।
के उनी वास्तवमै उनको आमा हुन सक्छिन्? उनले उनलाई एउटा सुन्दर कार उपहार स्वरूप दिए।
हरेक जिम्मेवार आमाले गरेझैं श्रीमती मार्सेलो म्याग्लाहेसले प्रायः आफ्ना बच्चालाई उनको जीवनका धेरै संवेदनशील मुद्दाहरूको बारेमा सल्लाह दिएका छन्।
गेब्रियल Magalhaes भाई बहनहरूको बारेमा:
सत्य यो हो कि ऊ एक्लो जन्मेको थिएन आफ्नो परिवारमा। गेब्रियल म्यागाल्हेसका भाई, भाइसियस र दिदीको नाम माया बहिनी छ। उनीहरू बीच एक अथाह सम्बन्ध अवस्थित छ। हामीले फुटबलरको इन्स्टाग्राममा हेरे पछि यो कुरा थाहा पाउँदछ - पृष्ठ जुन गब्रिएलका भाइबहिनीहरूलाई उसको सबैभन्दा वफादार फ्यानहरू देखाउँदछ।
गेब्रियल म्याग्लाहेसको दिदी, मायाारा र उनको भाइ, विनिसिसलाई भेट्नुहोस्।
अधिक विस्तृत रूपमा, गब्रिएल म्याग्लाहेज भाई, विनिसियस (रियल म्याड्रिडको होईन) V-जुनियर), र बहिनी, मायाराले तुरुन्तै आर्सेनलको इन्स्टाग्राम पृष्ठ अनुसरण गरे जुन क्षण उसले क्लबसँग हस्तान्तरण सम्झौतामा मोल गर्‍यो। निस्सन्देह, फुटबलर राम्रोसँग पालेको छ र पारिवारिक रोटी जुटाउने व्यक्तिको रूपमा, उहाँ उदाहरणबाट नेतृत्व गर्नुहुन्छ।
गेब्रियल Magalhaes नातेदारहरूको बारेमा:
उसको विवादास्पद व्यक्तित्वको कारणले, गब्रिएलका मातृ र बुवा हजुरबा हजुरआमाको बारेमा कुनै वैध जानकारी छैन। त्यस्तै, भर्खरै अधिग्रहण गरिएको आर्सेनल खेलाडीले आफ्ना काका र काकीको साथसाथै आफ्ना नेप्चहरू र भतिजहरूबारे कुरा गर्न आवश्यक देखेको छैन।
गेब्रियल Magalhaes व्यक्तिगत जीवन:
जस्तै नेमार र धेरै अन्य फैशन खेलाडीहरू, डिफेन्डर एक फैशनिस्टा हो। फुटबल पिच बाहिर उसको पोशाक र उपस्थिति गेब्रियलको फेशनप्रतिको प्रेमको पूर्ण गवाही हो। कसलाई थाहा छ? ... हुनसक्छ डिफेन्डरले मोडलि into्गको खोजी गर्ने सोच्यो होला यदि फुटबलले काम गरेन भने।
उहाँलाई फुटबलबाट टाढा जान्ने।
पर्याप्त हास्यास्पद, गेब्रियल Magalhaes अन्य फुटबल सम्बन्धित गतिविधिमा चासो देखाएको छ। एक पटक एक पटक, उनले खुलासा गरे कि उनका शौकहरूमा भिडियो गेमहरू खेल्न र यात्रा समावेश छ। यो पनि रोचक छ कि फुटबल खेलाडीले बास्केटबल खेलहरू हेर्न चासो देखाएको छ। तलको चित्रले भिडियो खेल र बास्केटबलको लागि गेब्रियलको प्रेमको सिंहावलोकन दिन्छ।
ऊ भिडियो खेल खेल्न कहिल्यै थाक्दैन।
गब्रिएल मगालहैस जीवन शैली तथ्यहरू:
जे होस् गेब्रिएल अझै आफ्नो क्यारियरको शिखरमा पुग्न सकेका छैनन्, उनले फुटबलको माध्यमबाट उचित मात्रामा आर्थिक कार्यवाही गरेका छन्। गब्रिएलको कमाईले उसलाई सन्तुलित जीवन दिन सक्छ, यद्यपि उसको तलबले मन नपराउन सक्छ लिओनेल मेस्सी, सी। रोनाल्डो, र नेमार.
गेब्रियल Magalhaes वेतन र नेट वर्थ:
प्रति वर्ष £ 3,385,200 € 3,773,508 $ 4,458,048
प्रति महिना £ 282,100 € 314,459 $ 371,504
प्रति हप्ता £ 65,000 € 72,456 $ 85,600
प्रति दिन £ 9,286 € 10,351 $ 12,229
प्रति घण्टा £ 387 € 431 $ 510
प्रति मिनेट £ 6.5 € 7.2 $ 8.5
प्रति सेकेन्ड £ 0.11 € 0.12 $ 0.14
यो केवल समय को कुरा हो कि उसले आफ्नो ज्याला र तलबमा सुधार अनुभव गर्नुपर्दछ। यस बायोलाई स्थापित गर्ने समयमा, गेब्रियल म्याग्लाहेसको १ Net.17.50० मिलियन डलरको अनुमानित नेट वर्थ छ।
गेब्रियल Magalhaes कारहरू:
२०२० सम्म, ब्राजिलियन फुटबलरले lux०० मिलियन डलरको अनुमानित रकमको विभिन्न विलासी अटोहरू कमाए। तल अवलोकन गरिए अनुसार ऊ आफ्नो सम्पत्तीको एक हिस्साका रूपमा धेरै संख्यामा विदेशी कारहरूको स्वामित्व राख्छ।
चेकआउट गेब्रियल Magalhaes 'कार।
गेब्रियल Magalhaes अनकही तथ्यहरू:
हाम्रो मेमोइर समेट्नका लागि, यहाँ केहि सत्यताहरू छन् जुन तपाईंलाई म्यानमाfफिट of को पूर्ण समझ लिन मद्दत गर्दछ।
तथ्य # १: उसको ११ पेन्स आम्दानी प्रति सेकेन्ड:
फुटबलर कत्तिको धनी भएको छ भनेर देखाउन, हामीले गेब्रियल म्यागाल्सेज आर्सेनलको तलबको विश्लेषण गरेका थियौं- तपाई यहाँ आएदेखि उसले के कमाएको छ भनेर देखाउन।
यो के गब्रिएल Magalhaes छ कमाई गरिएको छ किनकि तपाईं यो पृष्ठ हेर्न शुरू गर्नुभयो।
तथ्य # १: गेब्रियल Magalhaes घरपालुवा जनावरहरू:
निस्सन्देह, जब यो घरपालुवा जनावरहरूको हेरचाह गर्ने काममा आउँदछ तब ऊ बाहिर हुँदैन। गेब्रियलसँग एउटा सानो कुकुर छ जुन धेरै डरलाग्दो देखिदैन। उसले केवल प्रेम गर्दैन र प्रेम गर्दछ, तर सामान्यतया उनीसँग प्रत्येक पटक हिंड्दा ट्याग गर्दछ।
गेब्रियलको प्यारो पाल्तु कुकुरलाई भेट्नुहोस्।
तथ्य # १: गेब्रियल Magalhaes ट्याटू:
शस्त्रागार डिफेन्डर आफ्नो शरीरको स्याहीहरूको पर्याप्त संख्या प्रदर्शन गर्न ठूलो छ। आफ्नो फुटबल जर्सी लगाए पछि पनि, आफ्नो देब्रे हातको inking को ग्लैमर सबैले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छन्।
तपाईं उनको ट्याटू को अर्थ बताउन सक्नुहुन्छ? तपाईंको उत्तर टिप्पणी बाकसमा छोड्नुहोस्।
जस्तो धेरै डिफेन्डरहरू जस्तो छैन सर्जियो रामोस, Djibril Cisse, र मार्सोस रोजो, गेब्रियल केवल हल्का ट्याटुहरूमा रुचि राख्छन्। त्यसकारण उसले केवल आफ्नो देब्रे पाखुरा ट्याटू गरिसक्यो ऊपर उल्लिखित डिफेन्डरहरूसँग तुलना गर्ने जसले आफ्नो शरीरको प्रायः सबै भागहरूमा ट्याटू गरेका छन्।
तथ्य # १: औसत फिफा रेटिंग:
पिचमा, युवा प्लेयरले एकदम राम्रो फुटबल शक्ति प्रदर्शन गरेको छ जुन उसलाई फिफामा उचित रेटिंग प्रदान गरेको छ। तलको चित्रबाट तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, गेब्रियलसँग उसको सीप बढाउने र अझ धेरै बहुमूल्य खेलाडी बन्ने क्षमता छ।
ऊसँग ठूलो फुटबल क्षमता प्रदर्शन गर्ने उच्च संभावना छ।
द्रुत तथ्यहरू प्राप्त गर्न, यहाँ सारांस हो गेब्रियल Magalhaes 'प्रोफाइल तपाईको अवलोकनका लागि
पुरा नाम: गेब्रियल डोस सान्तोस मागाल्हेस
निक नाम: गेब्रियल Magalhaes
जन्म मिति: 19th डिसेम्बर 1997
जन्मस्थान: साउ पाउलो, ब्राजिलको पिरीटुबा जिल्ला
अभिभावक: श्री र श्रीमती मार्सेलो म्यागाल्हेस
Siblings: Vinicius, र Mayara
रुचि: भिडियो खेलहरू खेल्दै र यात्रा गर्दै
नेट मूल्य: € 17.50 मिलियन
क्यारियर ब्रेकडाउन: अवाई (२०१० - २०१))
LOSC लिल (२०१ 2017 - २०२०)
ESTAC Troyes (२०१ Lo लोन)
GNK दीनामा Zagreb द्वितीय (२०१ Lo लोन)
आर्सेनल (२०२० - वर्तमान)
पालतू जनावरहरू: कुकुर
हाम्रो गेब्रियल Magalhaes को जीवनीले हामीलाई सिकाउँछ कि हामीले कठिनाइ र चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्दछ चाहे उनीहरू जस्तोसुकै आए पनि। किनभने गब्रिएल Magalhaes अभिभावकहरु उनको परीक्षणको समयमा हस्तक्षेप, आफ्नो युवा क्यारियर बचाईएको थियो। सत्य के हो भने, केवल केहि व्यक्तिहरूले ब्राजिलियाली जस्तै दोस्रो अवसरहरू पाउँदछन्।
LifeBogger को सम्पूर्ण टीम गैब्रिएल Magalhaes बचपन कहानी पढ्न को लागी धन्यवाद छ। यदि हामी टिप्पणी सेक्सनमा फुटबलरको तपाईंको धारणाको बारे केही प्रतिक्रिया देख्यौं भने हामी सराहना गर्छौं।